Acer wuxuu cusboonaysiiyaa baaxadda Chromebook wuxuuna soosaaraa alaabada ciyaarta cusub #NextAtAcer | Wararka Gadget
Acer wuxuu cusboonaysiiyaa baaxadda Chromebook wuxuuna soosaaraa alaabada ciyaarta cusub #NextAtAcer
Munaasabadeeda ugu weyn #NextAtAcer, shirkadda ku takhasustay alaabada tiknoolojiyadda baaxadda leh gaar ahaan diiradda kombiyuutarka shaqsiga ah ayaa go'aansatay inay bilowdo cusboonaysiin muhiim ah oo buug-yaraheeda, sidaan Acer ayaa u cusbooneysiisay alaabteeda ciyaaraha desktop-ka Predator Orion 7000 cusub, iyo sidoo kale laptop cusub oo diiradda saaraya abuurista maadada, ConceptD 7 SpatialLabs, oo ay ka buuxaan kormeerayaal cusub iyo kombiyuutarada Chromebook. Aan si qoto dheer u eegno dhammaan badeecadaha cusub ee Acer noo keenay #NextAtAcer.
1 Ciyaarta desktop -ka oo leh Predator Orion 7000
2 ConceptD 7 Edition SpatialLabs Edition iyo Laptops Edition
3 Chromebooks cusub oo ugu fiican oo ka yimid buugga Acer
4 Wararka madadaalada iyo warbaahinada badan
Ciyaarta desktop -ka oo leh Predator Orion 7000
Miisaskaan cusub waxaa ku jira processor -yadii ugu dambeeyay xad -dhaaf ah Jiilka 12aad Intel® Core ™, ilaa NVIDIA GPU GeForce RTX ™ 3090 Taxane iyo ilaa 64GB oo ah DDR5-4000 RAM. Dibedda, waxay ka muuqataa laba 2.0mm Predator FrostBlade ™ 140 taageerayaasha hore iyo saddexaad 2.0mm Predator FrostBlade ™ 120 taageere gadaal ah oo lagu iftiimin karo xirmooyin midab leh oo ARGB ah. Dusha sare ee Orion 7000 chassis ayaa leh furitaan, taas oo u oggolaanaysa isticmaaleyaasha inay ku beddelaan taageere 120mm taageere 240mm ah. Heerka isku xirnaanta waxay leedahay Intel Killer 2.5G LAN iyo shabakadda bilaa -waayirka ah waxay leedahay jiilkii ugu dambeeyay ee WiFi 6E, xagga dekedaha waxba ma waayi doonto: saddex si dhakhso leh u gala USB 3.2 Gen 1 Nooca A, hal USB 3.2 Gen 1 Nooca C iyo laba isku xira maqal ah. Saddex USB 3.2 Gen 2 Nooca-A, hal USB 3.2 Gen 2 × 2 Nooca-C, laba dekedood oo USB 2.0 ah iyo saddex isku xirayaal maqal ayaa dhabarka yaal.
Sidoo kale, Acer wuxuu fursad u helay inuu bilaabo Predator GD711 waa mashruuca ciyaaraha casriga ah ee casriga ah ee 4K ku habboon consoles'ka iyo PC -ga sidoo kale miiska miiska ciyaaraha 55-inch Predator Ballaadhi meel bannaan oo leh khaanad wax lagu kaydiyo oo la dhisay iyo meel maaraynta fiilada.
ConceptD 7 Edition SpatialLabs Edition iyo Laptops Edition
ConceptD 7 Laptop Edition Edition SpatialLabs wuxuu leeyahay astaamaha 11aad ee Intel CoreSerie H. jiilka iyo xulashooyinka garaafyada kala duwan, oo ay ku jiraan NVIDIA GeForce RTX 3080 GPU la qaadan karo, sidaasna lagu beegsanayo abuurayaasha nuxurka iyo farshaxan -yahannada dhijitaalka ah. Dhinaceeda, khadka ConceptD 3 waxaa lagu ballaariyay moodallo cusub oo la qaadan karo oo leh shaashad 16-inji ah iyo saamiga 16:10, iyo sidoo kale tixraacyo la beddeli karo oo leh shaashado 15,6-inji ah.
Waxaan yeelan doonnaa ilaa 64 GB oo ah xusuusta DDR4 iyo illaa 2 TB oo ah kaydinta PCIe NVMe SSD iyo shaashadda UHD oo ay ansixisay PANTONE si loo daboolo 100% gamut midabka Adobe RGB. Software -ka Labs Spatial ayaa sidoo kale noqon doona mid ku habboon si loo wanaajiyo 2D marka loo eego 3D stereoscopic, iyo sidoo kale si aan kala go 'lahayn ula dhexgalida Injineerka Aan Rumayn iyo mashiinka naqshadeynta.
Acer ayaa sidoo kale ballaarisay khadkeeda ConceptD 3 oo leh moodooyin badan oo cusub oo ay ku jiraan laptop 16-inji ah oo cusub oo leh shaashadda saamiga 16:10 iyo 15,6-inji cusub oo la beddeli karo oo ay ku jiraan xitaa Wacom EMR stylus. Waxa kale oo la heli karaa tixraacyada ConceptD 3 Pro iyo ConceptD3 Ezel Pro, oo labaduba leh processor Intel® Core™ i7 oo awood u leh 4,6 GHz iyo NVIDIA T1200 laptop GPU.
ConceptD 7 SpatialLabs Edition (CN715-73G) ayaa laga heli doonaa Spain laga bilaabo December laga bilaabo 3.599 euro.
ConceptD 3 (CN316-73G) ayaa laga heli doonaa Spain laga bilaabo Oktoobar laga bilaabo 1.799 euro.
ConceptD 3 Pro (CN316-73P) ayaa laga heli doonaa Spain laga bilaabo December laga bilaabo 1.899 euro.
ConceptD 3 Ezel (CC315-73G) ayaa laga heli doonaa Spain laga bilaabo Oktoobar laga bilaabo 2.099 euro.
ConceptD 3 Ezel Pro (CC315-73P) ayaa laga heli doonaa Spain laga bilaabo Nofembar laga bilaabo 2.199 euro.
Chromebooks cusub oo ugu fiican oo ka yimid buugga Acer
Shirkadu waxay dooratay inay cusboonaysiiso ku dhawaad ​​dhammaan faylalka kombiyuutarada Chromebook. Acer Chromebook Spin 514 iyo Acer Chromebook Enterprise Spin 514 waxay isku dari doonaan naqshad waarta, la beddeli karo, bilaa taageere leh oo leh waxqabad horumarsan, iyagoo ka faa'iideysanaya jiilka 11aad ee Intel® Core ™ soo -saareyaasha, laga bilaabo € 799 bisha Oktoobar.
Qeyb ahaan, Acer Chromebook 515 iyo Acer Chromebook Enterprise 515 waxay yihiin moodooyinkii ugu cusbaa ee shirkadda ugu iibinta badan 15,6-inch Chromebook lineup, oo leh naqshad qaali ah, adkaysi sare, iyo waxqabadka ugu dambeeya ee 11th Gen Intel® Core ™. Laga bilaabo € 499 bishii Oktoobar.
Ugu dambayn, nooca “gelitaanka”, faylka Acer Chromebook 514 wuxuu ka faa'iideystaa MediaTek Kompanio 828 Processor Octa-core iyo naqshad aad loo qaadan karo oo wax ku ool ah meel kasta iyo ilaa 15 saacadood oo nolosha batteriga ah. Sida Acer Chromebook Spin 314 ay u muuqato naqshad la beddeli karo oo leh muuqaal 14-inji FHD ah, xulasho ballaadhan oo dekado ah iyo guddi taabasho oo OceanGlass ah oo saaxiibtinimo leh, dhammaantoodna qiimahoodu yahay € 399 ilaa 449 XNUMX, oo la heli karo Oktoobar.
Wararka madadaalada iyo warbaahinada badan
Marka hore mashruuca Acer L811, Mashruuc tuuritaan aad u gaaban oo bixiya 4K HDR10 xallin u hoggaansan iyo 3.000 lumens oo dhalaalaya waayo-aragnimo masraxa guriga oo cajiib ah, oo bixisa ilaa 120 inji, oo ka bilaabmaysa € 2.599 oo la bilaabay Nofembar.
Dhiniciisa, waxaan haynaa laba kormeere oo heer sare ah iyo mid dhexe ah siday u kala horreeyaan, Nitro XV272U KF waa kormeere 27 inji WQHD ah Taasi waxay leedahay heer cabbir ah 300 Hz, oo ay weheliso 4K iyo HDR600 qaraarka, iyo sidoo kale Acer CB273U waa kormeere WQHD (2560 × 1440) 27-inji IPS oo soo bandhigaya midabyo 8-bit ah oo muuqda, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon tafatirka sawirka iyo naqshadeynta, oo lagu qiimeeyay € 1.149 iyo € 449 siday u kala horreeyaan, oo la heli karo Noofembar.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Dhacdooyinka » Acer wuxuu cusboonaysiiyaa baaxadda Chromebook wuxuuna soosaaraa alaabada ciyaarta cusub #NextAtAcer
Sage iyo Libra 2 waa Kobo cusub eReaders Bluetooth